अनुशासन गर्नुका उद्देश्यहरू – The Word of God
‘प्रायः ती जुन व्यक्तिहरू चेताउनीप्रति पश्चात्तापद्वारा उत्तरदायी भए,तिनीहरूका ती विगतका अनुभवका कारण तिनीहरू अझ असल,बलिया र विश्वासयोग्य ख्रीष्टियान भए ।’ – जोन मेकार्थर
क. मण्डलीमा पवित्रता कायम गर्न
हिबू्रका लेखक भन्नुहुन्छ, “हामी परमेश्वरको पवित्रतामा सहभागी हौँ भनेर परमेश्वरले हामीलाई हाम्रै भलाइका निम्ति अनुशासित गर्नुहुन्छ । कुनै पनि अनुशासन त्यस बेलाका लागि सुखद हुँदैन, बरू कष्टदायक हुन्छ । त्यसो भए तापिन पछिबाट त त्यसमा तालिम पाएकाहरूका निम्ति धार्मिकता र शान्तिको फल हुन्छ” (हिबु्र १२ः१०–११)। जब मण्डलीले कुन पनि पाप गर्ने भाइ कि बहिनीलाई अनुशासन गर्दछ तब पाप गर्ने व्यक्तिप्रति र सारा मण्डलीकै पवित्राताको कुराप्रति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । एउटा राज्यले त अपराध गर्ने व्यक्तिलाई अनुशासन गर्छ भने मण्डलीले झन् कति बढ्दा परमेश्वरको आत्मिक राज्यका निम्ति अनुशासन कायम गर्नु आवश्यक छ । जब पाप गर्ने भाइ या बहिनीलाई अनुशासन गरिन्छ तब मण्डलीमा परमेश्वरप्रतिको भय उत्पन्न हुन्छ । परमेश्वर हरेक उहाँका छोराछोरीहरूमा पवित्रताको माग गर्नुहुन्छ (१ पत्रुस १ः१६)। यदि हामीले अनुशासन कायम गर्न हिच्किचायौँ भने हामीले परमेश्वरको पवित्रताको चरित्रका बारेमा नबुझेको या बेवास्ता गरेको थाहा हुन्छ । परमेश्वरको पवित्रतामा सहभागी हुन सकौं भनेर परमेश्वरले हाम्रो भलाइको निम्ति नै अनुशासन गर्नुहुन्छ । अनुशासन पक्कै पनि सुखद हुँदैन, यो कष्टदायक हुन्छ, तर पनि परमेश्वरले अनुशासनद्वारा हामीमा धार्मिकता र शान्तिको फल उत्पन्न गराउन चाहनुहुन्छ । कार्ल लेनिले यसरी भनेका छन् “अनुशासनविहीन मण्डली एउटा पवित्र, शक्ति र उन्नतिविहीन मण्डली हो ।”
ख. अरूहरूलाई पाप गर्नबाट निरूत्साहित गर्न
मण्डली अनुशासनले मण्डलीका अन्य सदस्यहरूलाई पाप गर्नबाट निरूत्साहित बनाउँछ । मण्डली अनुशासनको समयमा अनुशासनमा हुने व्यक्तिको निम्ति मात्र होइन उनीहरूको परिवारलगायत सम्पूर्ण मण्डलीमा नै पीडा र सन्तापको समय हुन्छ । यसरी पाप गरेका कारण आउने दुःखदायी परिणामले पनि धेरैलाई पाप गर्ने परिस्थितिबाट धेरै हदसम्म निरूत्साहित गराउँछ । पावल लेख्नुहुन्छ, “पाप गर्नेहरूलाई खुल्लम खुल्ला हप्काऊ र यसबाट अरूले चेतावनी पाउन सकून्” (१ तिमोथी ५ः२०)। पापलाई हामीले मण्डलीमा निरूत्साहित गर्नु नै पर्छ ।
पाप गर्ने भाइ कि बहिनीलाई मण्डलीले अनुशासनको बाटो बाट भएर नलैजाने हो भनेता मण्डली एउटा क्लब या राजनैतिक पार्टी जस्तो मात्र हुन्छ जहाँ प्रेममा निर्माण गर्ने काम हुँदैन । परमेश्वरले मण्डलीलाई यो संसारमा राख्नुभएको एउटा कारण मध्ये पापलाई निरूत्साही गर्न वा नष्ट गर्नु हो । सायद मण्डली यो धर्तीमा नहुँदो होता यो संसार सदोम र गोमोराभन्दा डरलाग्दो अवस्थाहरूबाट भएर गुज्रनेथ्यो ।
ग. मिलापका निम्ति दोस्रो महत्वपूर्ण उद्देश्यचाहिँ पाप गर्ने
व्यक्तिलाई परमेश्वर र मण्डलीका सामु मिलापमा ल्याउनु हो । यो सारा बाइबल नै मिलापको सन्देश बोकेको पुस्तक हो जहाँ ख्रीष्ट मिलापको केन्द्र अनि मिलापको कारण र नमुना पनि हुनुहुन्छ । पापले अशान्ति ल्याउँछ । त्यती मात्र होइन, त्यसले सारा परिवार र मण्डलीलाई नै अशान्त पार्दछ । यसको अन्त्य केवल मिलापले गर्दछ र यस कार्यका निम्ति नै मण्डलीलाई परमेश्वरले यो संसारमा राख्नुभएको छ । कसैले यसरी भनेका छन्, मण्डली पापीहरूका निम्ति हस्पिटल हो जहाँ पापीहरूले आत्मिक चङ्गाइ पाउँछन्, तर यो न्यायलय होइन जहाँ कानुन अनुसार मात्र अपराधको न्याय गरिन्छ । के आज हाम्रो मण्डली चङ्गाइ र मिलापको केन्द्र भएको छ ? एउटा लडेको भाइ या बहिनीले मण्डलीद्वारा मिलापको महसुस गर्नुपर्दछ । मत्ती १८ः१०–१४ सम्ममा येशूले हराएको भेडाका बारेमा उल्लेख गर्नुभएको छ । एउटा गोठालाले ती उनान्सयओटा भेडाहरूलाई छाडेर हराएको एउटा भेडाको खोजीमा ऊ निस्कियो । मण्डलीमा कहिलेकाहीँ विश्वासीहरू जानेर या अन्जानमा गल्ती काममा लाग्दछन्, र पापको कारण गलत निर्णय गरेर परमेश्वरदेखी र आÇनो मण्डलीदेखी पनि टाढा हुन्छन् । त्यस अवस्थामा हामी आत्मिक विश्वासीको काम चाहिँ ती पापमा लडेको व्यक्तिलाई पुनःमण्डलीमा फर्काइल्याउनुपर्ने हुन्छ । मिलापको सेवाकाइ गर्ने सेवकहरू नै आज परमेश्वर माग गर्नुहुन्छ । येशूले भन्नुभएको छ, “धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू, तिनीहरू परमेश्वरका पुत्र कहलाइनेछन्” (मत्ती ५ः९)।
घ. पुनःस्थापना गर्न
पुनःस्थापनाको कुरा गर्दा के एउटा पाप गर्ने व्यक्तिलाई हामीले पहिलेकै स्थानमा पुनः स्थापित गर्नुपर्ने जरूरी हुन्छ त? भन्ने प्रश्न प्रायः सबैको मनमा उठ्न सक्छ । बाइबलले पुनःस्थापनालाई पदको कुराभन्दा पनि परमेश्वरको पवित्रता, सङ्गति र भक्तिमा स्थापित गर्ने कुरामा बढी जोड दिइएको छ । मण्डली अनुशासनको पहिलो प्राथामिकता पदको पुनः स्थापना होइन बरू एउटा पापमा लडेको व्यक्तिलाई पुनः परमेश्वरको उपस्थितितर्फ फर्काएर ल्याउनु हो । पुनःस्थापनाको कार्यले व्यक्तिलाई परमेश्वरको सङ्गतिमा मिलाप गराउने ढोका खोल्दछ । अगुवाका हकमा एउटा पापमा लडेको अगुवालाई पुनःपहिलेको पदमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिन्न र यदि ल्याउन सकिन्छ भने कति समयपछि ल्याउने भन्ने कुरा यकिन गरेर भन्न सकिन्न । तर यी सबै पापको स्वाभाव र त्यसको प्रभाव हेरेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा अगुवाले पश्चाताप पछि मण्डलीको सेवाकाइमा पुनःस्थापना हुन सक्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन तर यसले धेरै समय पनि लिन सक्छ । त्यसको निम्ति हतार गरेर निर्णय गरिहाल्नु भन्दा पापको चोटबाट निको हुन कति समय लाग्छ भन्ने कुरा सधैँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । आज नेपाली मण्डलीका केही अगुवाहरू अनैतिक कार्यमा पक्राउ पर्दा पनि मण्डली अनुशासनको पक्रियामा नगई आफै मण्डलीको अगुवामा रहिरहेका धेरै दुःखदायी घटनाहरू पनि छन् । विडम्बना नै भनौँ, यस्ता अगुवाहरूबाट वर्तमान र भविश्यका मण्डलीहरूमा कसरी पवित्रताको आशा राख्न सकिन्छ र ? तर यहाँ कति यस्ता अगुवाहरू पनि छन् जो मण्डली अनुशासनको कठिन घडीबाट भएर गए र उनीहरूको परिवर्तित जीवन देखेर मण्डलीहरूले उनीहरूलाई पुनः पहिलेकै अगुवापदमा स्थापना गरेका छन् जसका निम्ति उनीहरूलाई कयौं वर्ष लाग्यो । तसर्थ हामीले पुनःस्थापना भन्नाले परमेश्वरसँगको सङ्गति र पवित्रताको पुनःस्थापना हो भन्ने बुझ्नुपर्छ तर यो कुनै स्थान या पद होइन । बाइबलमा यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् जो अगुवा भएर पनि अनुशासनको बाटो भएर गए जसको नमुनाका कारण हामीलाई एउटा नयाँ आशाा र ऊर्जा मिलेको छ । पाष्टर तथा लेखक जोन मेकार्थर भन्नुहुन्छ, “प्रायः जो चेतावनीप्रति पश्चात्तापद्वारा उत्तरदायी भए, तिनीहरूका ती विगतका अनुभवको कारण तिनीहरू अझ असल, बलिया र विश्वासयोग्य ख्रीष्टयन भए ।” छसाच्चैँ नै मेकार्थरको विचार झैं आज कैयौं विश्वासी तथा अगुवाहरू छन् जसको जीवन मण्डली अनुशासनपछि धेरै नै आशिषित भएको पाइन्छ । उनीहरूका परिवारमा पति–पत्नीबीच नयाँ र बलीयो सम्बन्धको थालनी भएको छ । परमेश्वरले धेरै पश्चतापी अगुवाहरूलाई अघिको भन्दा शक्तिसाली रूपमा मण्डली इतिहासमा प्रयोग गर्नुभएको छ ।
आउनेवाला परमेश्वरको शुन्दर राज्य जो परमेश्वरले पुनःस्थापना गर्नुहुन्छ, त्यसको एउटा छायाँ मण्डलीमा परमेश्वरले पापी मानिसहरूलाई अनुशासनको प्रक्रियाद्वारा पुनःस्थापना गरेर पुरा गरिरहनु भएको छ । पापले सबैकुरा भताभुङ्क र लथालिङ्क बनाउँछ तर मण्डलीद्वारा परमेश्वर त्यसलाई जोड्ने काम गर्नुहुन्छ । पावल लेख्छन्, म तिमीहरूकहाँ आउँदा प्रभुले मलाई दिनुभएको अधिकार प्रयोग गर्न नपरोस् । त्यो त उहाँले बनाउनको निम्ति दिनुभएको हो भत्काउनको निम्ति होइन (२ कोरिन्थी १३ः१०) ।मण्डलीलाई दिनुभएको अधिकार जिवन निर्माणको निम्ति नै हो । पापले भत्किएको जिवनलाई पुन परमेश्वरकहाँ फर्काइल्याउनलाई मण्डली अनुशासन अपरिहार्य छ । यो बाटो भएर जानेहरू कहिल्यै भाँचिएर जाने छैनन तर पुन–निर्माण भएर परमेश्वरको अघि कामलाग्दो भाँडोको रूपमा तयारी हुनेछन् ।
ङ. मण्डलीको सम्बन्ध र साक्षीलाई बाहिरी संसारमा प्रभावशाली बनाउन
रोर्बट एल. साउसी भन्नुहुन्छ, “मण्डली परमेश्वरको भएको कारणले मात्र मण्डलीद्वारा अनुशासनको माग गरिएको हैन बरू मण्डली संसारमा परमेश्वरको जीवित साक्षी भएको कारणले नै हो । हरेक युगहरूमा परमेश्वरले मण्डलीद्वारा नै आफ्नो नाउँ र महिमा संसारभर चिनाउनलाई एउटा साधनको रूपमा मण्डलीलाई प्रयोग गर्नुभयो र एउटा सिद्ध मण्डलीले नै त्यो महिमा संसारमा प्रकट गर्दछ । मण्डलीले परमेश्वरको सुसमाचारको योग्य जीवन बिताउनका साथै बाहिरी संसार र समाजमा एउटा नमुनाको सम्बन्ध कायम राख्नलाई पनि मण्डली–अनुशासन अपरिहार्य हुन्छ । ख्रीष्टियानहरू अनुशासनमा हिँड्छन् र बाइबललाई अक्षरस : पालन गर्छन भन्ने कुराको सन्देश फैलाउनुपरेको छ । उदाहरणका निम्ति आजसम्म गैर–ईसाईहरूले विश्वासीहरूलाई रक्सी चुरोट पिउँदैनन्, झूट बोल्दैनन् ठग्दैनन्, झगडा गदैनन् र उनीहरू राम्रा मानिसहरू हुन् भनी चिन्दै आएका छन् । गैर–ईसाईहरूले न्याय र इमान्दारिताको बारेमा कसैलाई सम्झनु परेमा उनीहरूले ख्रीष्टियजनहरूलाई सम्झना गरून् । काठमाडौंमा बसेको १० वर्षको अवधिमा अन्यजातिले ख्रीष्टियनहरूलाई मात्र मेरो घर दिन्छु भनेको सुनेको छु । यो धेरै राम्रो साक्षी हो । हाम्रो इमानदारिता र पवित्रताको जिवन नै संसारमा परमेश्वरको निम्ति महान सुसमाचार हो । सायद हामी सुसमाचार प्रचारमा जान सक्दैनौ होला, तर हामीले जिएको पवित्रता र अनुशासीत जिवनले संसारको बीचमा हाम्रो साक्षीलाई शक्तिसाली बनाउनेछ । किनकि संसारको एउटै आशा मण्डली नै हो । परमेश्वर मण्डलीद्वारा आफ्नो योजनाहरू संसारमा पुरा गरिरहनुभएको छ ।
Writer : Lazarus Thulung